हेल्लो सरकार, किन चलेनन सरकारी उद्योग ? कस्ले रोक्दैछ..? – Arthatantra.com
निरन्तर बोनस लिन चाहनुहुन्छ ? पढ्नुहोस यो विवरण
नेशसन हाइड्रोको शेयर छ तपाईसंग ? डिम्याट गरीहाल्नुस
बुटवल पावरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओको प्रतिकित्ता मुल्य कती ?
हेल्लो सरकार, किन चलेनन सरकारी उद्योग ? कस्ले रोक्दैछ..?
आफ्नो स्वामित्वका आठ ठूला उद्योग पुन सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी घोषणा अलपत्र
काठमाडौ । रूग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका आठ ठूला उद्योग पुन सञ्चालनमा ल्याउने आठ महिनाअघिको सरकारी घोषणा अलपत्र परेको छ। पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने अभियानको शुरूवात नेपाल औषधि लिमिटेडबाट थालेका थिए। सोही अनुसार उक्त निकायले जीवनजलको उत्पादन थालिसकेको छ।
तर सरकारले थप बजेट नदिँदा कम्तीमा १० वटा औषधि निकाल्ने उक्त उद्योगको योजना अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन । अर्बौं रूपैयाँको लगानी र सोही अनुरुपको योजना तयार गर्ने काममा थुप्रै छलफल तथा अध्ययन आवश्यक देखिएकोले योजना अगाडि बढाउन नसकिएको उद्योगमन्त्रालय बताउछ ।
आठ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयले हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग पुन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
अन्य उद्योगको हकमा भने कुन प्रारूपमा जाने भन्नेबारे निर्णयनै हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरुलाई नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा विवाद रहेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्राविधिक अध्ययन टोलीले ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने र धेरै बजेट लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ। उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन, अध्ययन, अनुसन्धान त पटकपटक भएका छन तर अहिलेसम्म प्राविधिक रूपले यो चल्छ नै भन्ने पक्का प्रतिवेदन आएको छैन । पूरै नयाँ उपकरण राखेर उद्योग सञ्चालन गर्ने बजेट भने सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ ।
विगतमा पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न मन्त्रीले रूग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना ल्याए पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजना रोकिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन ।
२०७४ पुष १० गते प्रकाशित
नेपालमा ३५ लाख एटीएम जोखिममा, कतै तपाईको पनि त परेन ? काठमाण्डौं । एटीएम हृयाक गर्ने अन्तराष्ट्रिय गिरोह नेपालमा लगातार पक्राउ पर्न थालेपछि […]
भूकम्प : १६ हजारभन्दा बढी घरले पाए १२ अर्ब ३ करोड २ लाख भुक्तानी ! काठमाण्डौँ । गत वर्ष भूकम्पमा परी क्षति भएका तथा जोखिम भएका घरलाई बीमा बापत अहिलेसम्म १२ […]